Etu ị ga - esi gosipụta ọdịnaya B2B gị iji mepụta ndozi ya na NetLine Portal | Martech Zone
Etu esi ejikọ ọdịnaya B2B gị iji mepụta ndaghari na Portal NetLine
NetLinePortal BPB bu uzo mbu nke ndi mmadu ebe ndi ulo oru nwere ike imeputa ihe omuma ihe omuma iji mee ka ha mata ma obu jide ha.
Usoro a na-enye onyinye abuo abuo:
LeadFlow n'ịwa na-eduga, ikwe gị syndicate ọdịnaya gị, tinye ụzọ nzacha na isi, na-agba ọsọ ahia di na akaụntụ, tinye ajụjụ ndị a na-ajụkarị, tọọ mmefu ego gị na nhazi oge gị, nweta akụkọ mkpọsa, ma nweta ọfụma ụzọ. Ihe na-eduga na-amalite na $ 9 kwa ndu.
Ọdịnaya iji mee ka mmata mara site na ịmepụta ọdịnaya gị na ịnweta akụkọ mkpọsa. Nke a bụ n'efu nye ndị ọrụ niile.
NetLine na-arụ ọrụ ntanetịime ọdịnaya B2B zuru ụwa ọnụ, Nzaghachi, nke na-enyere ha aka ijikọ ọdịnaya gị na ndị ziri ezi. Netwọk ahụ na-ejide data nke mbụ nke ndị otu nyefere ozugbo ka ha dejupụta akwụkwọ iji rịọ ọdịnaya gị.
Ndị mmekọ ha na-ebipụta akwụkwọ, dị ka anyị, na-arụsi ọrụ ike ebe ha na-ewepụta ọdịnaya ọhụụ maka ọdịmma nke ndị na-ege ha ntị, nyochaa arụmọrụ, ma nyochaa demographics nke ndị na-ege ntị na ikike nke Audience Intelligence Reports (AIR). Ma ọ bụghị naanị saịtị ọ bụla ha nabatara, RevResponse nwere ọnụọgụ 99% ịjụ maka ngwa ndị mbipụta ọhụrụ iji sonyere.
Usoro nnabata ahụ gụnyere nyochagharị nke ọma iji hụ na ndị nkwusa niile gbasoro ụkpụrụ nduzi obodo siri ike, na-enye ndị mgbasa ozi:
Ezigbo ọdịnaya - Ọdịnaya gị dị na ụlọ ọrụ dị mma-nke ebipụtara na nnukwu ọbá akwụkwọ ọkachamara ọkachamara nke ọdịnaya weebụ, TradePub.com, nke NetLine nwere. Ndị otu ha nwere ike ịrịọ ọdịnaya gị ma nweta ya n'oge ọ bụla site na ngwaọrụ ọ bụla na ọba akwụkwọ ha.
Ezigbo njikọta - Mgbe ị na-arụ ọrụ kacha ukwuu B2B ọdịnaya syndication network na weghara ezigbo profaịlụ kpọmkwem site na ndị ọkachamara, ịkwesighi ịga ebe ọzọ - a na-emepụta usoro niile site na ikpo okwu ha, yana ndị mbipụta ha. Jụọ ha ebe ndu gị si bịa na ha ga-agwa gị - adreesị IP, timestamp, na ndị ọzọ - nghọta 100%.
Ezigbo aka - Netwọk ọdịnaya B2B ha na ọba akwụkwọ akụ na-akwado ezigbo mmekọrịta ndị ọrụ ebe ndị ọkachamara 125 nde + na-arụsi ọrụ ike na-enyocha ma na-eri ọdịnaya kwa ọnwa - nke ahụ bụ ezigbo ebumnuche. Omume karịrị otu ihu peeji, omume ha gụnyere arịrịọ ọdịnaya, nkwenye email, na nbudata ọdịnaya na mmezu mbu oge. 80% nke ọdịnaya bipụtara bipụtara ka ebudatara n'ime ụbọchị atọ.
Ezigbo Ogo - A na-ahazi usoro mkpocha data ha nke ọma n'ofe mkpọsa niile na-echebe ogo ndu ndị ejidere. Ngwọta arụmọrụ na otu ndị ọkachamara n'ọgbọ na-eduzi gị na-ejide n'aka na ị ga-akwụ ụgwọ naanị maka ndu ndị na-ezute ebumnuche mkpọsa gị - ọ dịghị ihe ọzọ.
Ezigbo Ndị mmadụ - Ndị otu ha gụnyere ọtụtụ puku ndị ọkachamara nyeferela profaịlụ ọkachamara 15 + iji nweta ụlọ ọrụ ọbá akwụkwọ ha, na-eme ka ha bụrụ ndị na-ege ntị nke ukwuu - Enweghị ndepụta azụrụ ma ọ bụ agbazite, oge. Ndị otu ha eripịala nde 40 + ọdịnaya na njem nyocha ha na NetLine.
Ezi Nchebe - The ndu ọgbọ usoro a na-echebe mmalite imecha site na ha keukwu nche tinyere gụnyere na-aga n'ihu Qualys nche vulnerability enyocha kwa na SSL izo ya ezo.
Ezigbo Realkpụrụ - NetLine na-arụ ọrụ na-eso ụkpụrụ ise dị mkpa: ihe ọhụrụ, imekọ ihe ọnụ, iguzosi ike n'ezi ihe, afọ ojuju ndị ahịa, na ịza ajụjụ. Teknụzụ ha dị elu na oke ọnụ ọgụgụ ha nọ n'ọnọdụ pụrụ iche iji nweta nsonaazụ ndị ahịa na-achọ - ha anaghị etinye ihe ịga nke ọma ha site na imebi iwu. NetLine na-asọpụrụ CAN-SPAM, CASL, na Ekwela oku ndekọ.
Debanye maka Free Netline Portal gị Debanye maka Netline Demo
Ngosipụta: Anyị na-eji njikọ njikọ anyị na post a na NetlinePortal na RevResponse.
Tags: ọdịnaya ọdịnayandabandu nduọnụ ụzọ ntanetị-acha ọcha akwụkwọAkwụkwọ edemede
Ome Social: Mepụta, hụchalụ, ma Jikwaa Bots Social Chat
Aprimo na ADAM: Digital Asset Management maka Ahịa Njem